I-China i-4 oz Spice Glass Shaker ene-Chalkboard Labels kunye ne-Stainless Steel Lid fekt kunye nabaxhasi | IHoyer
I-4 ye-Spice yeGlasi ye-oz Spice eneelebuli zeKhabodi kunye neLize yensimbi engenanto
Olu seto lupheleleyo lweebhotile zeziqholo zinika yonke into oyifunayo ukuze ugcine iziqholo zakho kunye namayeza ahleliweyo kwaye esebenzayo kwizikhongozelo zakho zeziqwengana, iikhabhathi, kunye nezihombisi.
Isigqubuthelo sensimbi engenagwele, akukho kutu, kulula ukucoca. Gcina umxholo wakho usemtsha ngezi zinto zitywina ezinamandla i-LIDS. Ngokungafaniyo ne-aluminium, isinyithi, okanye i-tin, eyethu yenziwa ngentsimbi engenasici. Akukho sidingo sokukhathazeka malunga neesenti okanye i-dents-ephezulu yeentsimbi ezingenasici ziya kusula ngokulula zicoceke kwaye ziphakame zinxibe yonke imihla.
Ukuphakama: I-82mm / 3.23 intshi
Ububanzi: I-45mm / 1.77 intshi
Uhlobo lwekhitshi- musa ukuchitha ixesha ugcina iziqholo kwiiplastiki ezifumileyo. Le seti yemigangatho yesitayile esinesitayile esimnandi, kwisitayile esikhawulezayo iya kuphucula ngokukhawuleza ukujonga kunye nokuziva kwekhitshi lakho.
Ukusebenza kunye ne-multipurpose-akukho mda kwiintlobo ze-USES zezi zijeki. Banokwenza lula izipho zepati, ukuhombisa iiprojekthi, ubugcisa basekhaya, izinto zeofisi, okanye izinto ezenziwe ekhaya. Ukuba ufuna isipho esinomdla, esicinga, singaqhubeki. Iseti nganye igqunywe kakuhle kwibhokisi enomtsalane ilungele izipho.
Iilebheli ezinokuphinda zisetyenziswe-ngaba ufuna ukwenza enye into ngebhotile? Akunangxaki, thambisa iileyibhile yePVC ngokuncinci kwaye ungabhala kuyo. Iseti nganye ibandakanya iilebheli ezijikelezayo nezixande, ukuze ukwazi ukulebhelisha iminqwazi, iglasi, okanye zombini! Sebenzisa imakishi evaliweyo ebhodini ukuze uchonge ngokulula imixholo yebhokhwe nganye.
Iibhotile zethu zezinongo azisetyenziswa ekhitshini kuphela, kodwa kukwakho neenjongo ezahlukeneyo. Zisebenzise ukugcina iimpahla zaseofisini, iilekese ezenziwe ekhaya, kunye neebhetshi zomntwana wakho zamva. Ndizalise ngento ekhethekileyo, kwaye baya kulungiselela ishawa emthendelekweni okanye ngosuku lokuzalwa!
Yiza lula kunye nesitayile sanamhlanje
Ngezi mbiza zeglasi ezifanelekileyo, akufuneki uthandabuze kwisitayile kunye nesitayile. Bambekile ngokucocekileyo ecaleni, bagcina indawo kwiidrowa okanye kwiikhabhathi kwaye babukeka behle. Ngaphandle kwamathandabuzo, baya kuyitshisa ikhitshi lakho ngeendlela ezininzi!
Ubungakanani Umthamo: 100 ml Ukuphakama: 8,2 cm Ububanzi: 4.5 cm Umthamo: 3.5 oz Ukuphakama: 3.23 intshi Ububanzi: 1.77 intshi
Edlulileyo: Ityuwa kunye nePepper Grinder Mill
Okulandelayo: I-Cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka i-16 oz Boston ibhotile ejikelezileyo kunye nepeyinti yentsimbi engenasici
Imenyu ityiwa kunye nepepile
ityuwa ipepile iviniga iseti
ibhotile yokuhambisa iviniga